Syriana sy Libaney: Eo Amin’ny Adin’ny Mari-Panondroana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2017 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, русский, Português, 繁體中文, Français, English
Eo amin'ny sisintany Syriana-Libaney. Saripika nalain'ny mpanoratra teny anglisy.
Nahazatra ahy ny anisan'ny olona nanoratra. Ankehitriny ny asa fanoratana dia tahaka ny firenena iray maniry ahy handeha.
Mifoha maraina tanaty hatsiaka mamirifiry any ivelany aho. Miarahaba vehivavy mpanadio aho. Taitra izy hoe misy olona miarahaba azy ao amin'ilay trano lehibe mirentirenty ity. Tsy fantany na mpandalo aho na mpitsoa-ponenana. Mamoaka moramora piti-dranomandry eny amiko, toy ny tokony tsy ho voamariko akory ny habakabaka.
Naharay taratasy tao amin'ny mailaka aho mampahafantatra ahy fa tapitra ny fiantohana ara-pahasalamako. Efa andro maromaro ilay taratasy efa misokatra no mipetraka eo ambony fandriako .
Inona no azoko atao manoloana izany vaovao izany? Raha olona mpifoka aho dia efa nifoka aho izao; ary nanopi-maso an'io taratasy io sy nanozona izao tontolo izao aho raha namoaka ny setroky ny “tsy firaharahiako” eny amin'ny rivotra. Fa tsy mpiifoka aho, ka nipetraka teo akaikin'ilay taratasy misokatra tahaka ny adala raha nieritreritra ireo tanandehibe manondrana ny korontany ao anatiko.
Mieritreritra an'i Beirota aho. Izao no fahazarako, fahazarana Bedouin. Mpifindrafindra monina aho, saingy manana fo toy ny an'ny mpamboly eo an-toerana, izay manazava ity fijaliana—mahatsiravina—ity.
Tsy afaka mijanona ela amin'ny toerana iray aho. Saingy malahelo ilay toerana toy ny hoe tsy mahalala toeran-kafa aho isaky ny mandao, tahaka ny hoe teraka teo amin'ny tranonjazan'ny tanin-dry zareo aho ary nivoaka avy amin'ny voan'ny hazon-dry zareo.
Nahavita nitondra ny maha sesitany ahy aho teny amin'izay rehetra nalehako, tsy fahatsapana mora anefa izany, saingy zaka ihany. Izany no herin'ny fahamarinana sy ny lojika. Vahiny tokoa aho.
Sarin'i Beirota. Nalain'ny mpanoratra.
Fa tsy ho vitako no nitondra ny maha sesitany ahy tany Syria. Tsy afaka miaina aho raha mahafantatra hoe nandà ny tranonjazan'ny reniko aho raha nandà ahy izany.
Toy ny zaza vao teraka mila ny tavonin-dreniny, manontany tena aho hoe ahoana no naha tonga ahy ho olom-pirenena salama raha tsy novelomin'ny fireneko aho.
Lasa toy ny ankizy malemy sy kilemaina izahay. Niala aho fony feno fitoambinifolo taona, zaza teraka tsy tonga volana teraka tamin'ny fahafito volana am-bohoka. Nila oksizena politika, fahalalahan'ny olomelona sy ny vehivavy aho. Nila sakafo fototra betsaka aho hitomboako ara-tsaina.
Isaky ny mahatsapa ny maha Libaney ahy aho dia manongo ahy ny marina.
Tsy mba manana taratasy akory aho na dia hoe avy amin'ny vehivavy avy ao amin'ireo tendrombohitra Libaney aza ny tranonjaza nitondra ahy. Indrisy fa tranonjaza fotsiny ihany izany, tsy mikaonty ny ampahany vehivavyao amin'ity faritra ity.
Isaky ny tezitra amin'ny Libanona aho dia te-hiteny hoe: “manakasitraka aho fa tsy afaka manome ahy ny zom-pireneny ny reniko, tsy mila tanindrazana tsy mila ahy aho”
Harary ny kiboko rehefa tapitra io fehezan-teny io
Zatra nanao fanontanian-jaza aho hoe: “Mila ahy ve i Syria? Fantatro fa tsy mila i Syrian'i Assad. Fa iza i Syria?”
“Alika Syriana, Syriana mpangalatra” Izany no namaritan'ny dadatoako Libaney an'ilay tovolahy Syriana nitondra ahy nody rehefa nivoaka tany ivelany niaraka taminy tamin'ny lalan'i Beirota.
Tsy niraharaha akory ireo havako Libaney hoe tao anatin'ilay efitra aho raha niresaka momba ireo Syriana mpiasa matroka hoditra kokoa izy ireo amin'ny fitsarana an-tendrony ratsy, izay arahin'ny fangoraham-po mampalahelo sy faikany.
Zatra midera ny raiko noho ny fitondrany ny reniko ao anatin'ny fitoviana ry zareo, ary tsy afenin'izy ireo ny fialonany ny raiko izay tsy mba namitaka ny reniko. Zatra mitsiriritra ny reniko amin'ny vadiny ry zareo rehefa mitaraina noho ny herisetra ataon'ny vadin-dry zareo. Ny raiko izay zatra mitondra rano amin'ny vera ka mihaino amin'ny fony manontolo.
Tsy teraka matroka hoditra manokana ny raiko. Saingy nihamatroka, tahaka ny olon-drehetra ao Syria izy.
Matroka hoditra ny raiko sady Syriana. Mba fantatr'izy ireo ve izany?
“Ny vadiko no satro-boninahitro”. “Lasa ny vadiko, ary mianiana aho fa tsy misy vehivavy toa azy manerana an'i Aleppo” – sasantsasany amin'ny fehezanteny filazan'ny lehilahy Syriana matroka hoditra izany.
Zatra tsy niraharaha aho fa nanampy ahy tany Libanona ny volon-koditro somary mazavazava. Ary indraindray aho manararaotra miteny amin'ny tenim-paritra libaney noho ny antony roa:
Voalohany, te-hanombana ny haavon'ny fankahalana tao anatin'ny efitrano iray aho, na dia tsy nanavotra ahy tamin'ny tenim-pankahalana rehetra nikendrena ny mari-panondroana maha Syriana ahy aza ny fitenenako amin'iny fitenim-paritra iny.
Faharoa, tsy misy ny tahoetra mety hanohintohinana ahy ara-pananahana. Zatra mieritreritra aho fa mety misy maka an-keriny na voaholana raha fantatra fa Syriana mpitsoa-ponenana aho.
Fa rehefa nisinda ny hatezerako tamin'ilay lehilahy izay nikasa hanohintohina ahy ara-pananahana tao amin'ny fiara fitateram-bahoaka iray, dia tsapako fa tsy ny maha Libaney na Syriana ahy no maha afaka ahy tsy ho voantohintohina ara-pananahana raha mbola vehivavy koa aho.
Toy ny zaza izay nisara-dray aman-dreny aho rehefa misy ampahany libaney sy ampahany syriana ato amiko, ary samy mankahala anao izy roa ireo satria ny ampahany aminao dia mampahatsiahy ilay hafa ary tsy misy amin'izy ireo no miady hitazona anao.
Fa mifanohitra amin'izay, te hiala aminao amin'ny fomba rehetra izy ireo ary iriny ianao mba ho lehibe haingana ka hiaina any ivelany.
Nitombo haingana aho, fa mbola mila oksizena betsaka mba ahafahan'ny havokavoko mameno ny fitomboany.
Nahafantatra aho indray andro fa kisendrasendra fotsiny ihany ny mifoka oksizena betsaka mba ahafahana mihikiaka mafy mandritra ny fihetsiketseham-panoherana fitondrana.
Fa raha ny tena marina dia mbola ao anatin'ny fanakotrehana lehibe antsoina hoe fiainana aho, reraka tsy afa-manangana akory ity vatako izay hitondra ahy ho any amin'ny hoavy, ny hoavy izay nahaterahako aloha kokoa.
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny Al Araby amin'ny teny arabo mitondra ny lohateny hoe ‘في اشتباك الهو, ary nadikan'i Mary Hazboun tamin'ny teny Anglisy (miampy ny fanitsian'i Joey Ayoub). Ilay dikateny anglisy dia navoaka voalohany tao amin'ny Hummus For Thought.